2 Xildhibaan oo xog ka bixiyey sirta ka dambeysa wixii maanta ka dhacay BF - Caasimada Online
Home Warar 2 Xildhibaan oo xog ka bixiyey sirta ka dambeysa wixii maanta ka...
2 Xildhibaan oo xog ka bixiyey sirta ka dambeysa wixii maanta ka dhacay BF
Muqdisho (Caasimada Online) Labo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha keenay in laalo mooshin laga keenay xukuumadii horre ee uu hoggaaminayay Cabduqaadir Faarax Shirdoon.
Cali Khaliif Galeyr iyo Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhagdheer) ayaa VOA uga warramay wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee Muqdisho.
Ugu horreyn xildhibaan Cali Khaliif Galeyr ayaa tilmaamay in ayaan daro ay tahay mooshin laga keenay wasiiro horrey u dhahay waa ay fashilantay xukuumadii ay ka tirsanaayeen haddana in laga daba keeno mooshin kale.
Wuxuu xusay in arrintaas ayba ogaayeen maalmahan madaxtooyada ay wadeen olole ay ku doonayeen in lagu laalo mooshinka baarlamaanka yaalla, si loo soo celiyo qaar ka mid wasiiradii horre, “Laakiin looba joogo marka la keeno baarlamaanka iyagoo wasiiro” ayuu yiri.
Ugu dambeyn ra’iisal wasaarihii horre ee Soomaaliya, Cali Khaliif Galeyr ayaa ku celceliyay in uusan dooneynin in wax ka sheego ra’iisal wasaaraha cusub maadama uu ku soo dhacay wax horrey u soo socday.
Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhagdheer) ayaa ka soo horjeestay hadalka Cali Khaliif Galeyr, wuxuuna ku tilmaamay mooshinka in markii horre uu ahaa mid qalad ah.
Wuxuu tilmaamay in xaq aysan ahayn 35-wasiir, wasiir ku-xigeen iyo agaasimayaal in aan la oran karin dhammaantood waa ay fashilmeen oo waxbo ma qaban, “Xaq ayey u lee yihiin in qof kasta oo dalka wax u qaban kara in uu soo laabto” ayuu yiri Xildhibaan Dhuxulow.
Wuxuu ku celceliyay in cid kasta oo wax qaban karta ay xaq u lee yihiin in lagu soo daro xukuumada oo cod la siin karo ayuu markale yiri.
Si kastaba, hadallada labadan xildhibaan ee kala aragtida duwan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maanta 113 xildhibaan ay u codeeyeen in ajandaha laga saaro mooshinka, halka 99 xildhibaan ay u codeeyeen in mooshinka la meelmariyo.
Xafiiska Wararka Muqdisho
Veteran ruler Guelleh re-elected Djibouti president for fifth term
Caasimada Online - April 10, 2021
Djibouti's veteran ruler Ismail Omar Guelleh was re-elected for a fifth term as president with more than 98 percent of the vote, according to...
International Partners appeal to Somali leaders to reach agreement
English April 6, 2021
Turkey condemns terror attacks in Somalia
English April 4, 2021
Al-Shabaab attack military bases in Somalia
English April 3, 2021
IMF grants Somalia $970,000 interim assistance
What UAE’s growing presence means to Somaliland
English March 31, 2021
Somalia Al-Shabaab militants ban ‘deadly and unsafe’ AstraZeneca vaccine
Politicians hindering the electoral process are playing with fire – Presidential Candidate Jabril Abdulle
English March 28, 2021
Somalia says Kenyan move to close camps is politically motivated
Pentagon official: Trump’s Somalia withdrawal ‘probably’ had ‘significant downsides’
English March 26, 2021
Somalia warns envoys against interference in political affairs
Somali president, under pressure to quit, gets backing from official in rival camp
English March 24, 2021
Int’l partners call for end to Somalia election impasse
English March 21, 2021
US presses Somalia to hold elections immediately
English March 20, 2021
Emiratis accuse Netanyahu of exploiting normalization deal for election gain
English March 19, 2021
Britain bars travelers from Somalia
English March 17, 2021